सिसिटिभी फुटेज हेरेर विजयका बाबु जानाकीले भने उसैले मा’रेको रहेछ ! – Khabarhouse
सिसिटिभी फुटेज हेरेर विजयका बाबु जानाकीले भने उसैले मा’रेको रहेछ !
Khabar house | १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०५:४७ | Comments
काठमान्डौ : भान्सामा दुई जना मान्छे काम गरिरहेका देखिन्छन्। एक जना महिला, अर्को पुरुष। पुरुषले महिलालाई भान्साको काममा सघाइरहेजस्तो देखिन्छ। चुलामा केही बसाउन लागेकी महिलालाई अ’चानक पुरुषले पछाडिबाट समात्छ, तान्छ र भुइँमा ल’डाउँछ। ललितपुर महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका डीएसपी सन्तोष तामाङ विजय चौधरीका बुबा जानकी चौधरीलाई यी दृश्य देखाइरहेका छन्।
जेठो छोरा विजयको मृ’त्युको खबर सुनेर दाङबाट बस चढेर मंगलबार राती काठमाडौँ आइपुगेका हुन् जानकी। उनी करिब ६ वर्ष देखि काठमाडौं बसेको छोराको मृ’त्युको य’थार्थ विवरण जान्न चाहन्थे । बुधबार बिहानै उनी जावला खेल प्रहरी परिसर पुगे, जहाँ उनलाई प्रहरीले परिसरको मूल भवनको दोस्रो तल्लामा पुर्‍यायो। र, सोमबार सानेपास्थित पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको घरमा भएको घ’टनाको सीसीटीभी फुटेज देखाइयो।
फुटेजमा जानकीले देख्छन्– भुइँमा ल’डेकी महिलालाई पुरुषले पि’र्काजस्तो वस्तु उ’ठाएर हा’न्न थाल्छ। चश्मा लगाएका जानकीका आँखा अविश्वासले ति’र्मिराउँछन्। उनले मान्छे ठ’म्याउने प्र’यासमा चश्मा फु’कालेर पनि ती दृश्य दोहोर्‍याएर हेर्छन् । तर, मान्छे चिन्दैनन्। डीएसपी तामाङले उनलाई घरबाहिरको अर्को दृश्य देखाए। जसमा एउटा अग्लो मान्छे बाहिरबाट घरभित्र छि’र्दै गरेको देखिन्छ।
उसको जि’उडाल र चा’लढाल हेरेर जानकी भन्न सक्छन्– मेरो जेठो छोरो विजय यही हो। उसले दुईतिर मि’लाएर कपाल को’रेको छ। ज्याकेट र चप्पल लगाएको छ। ‘अब यी महिलालाई पिर्काले हा’न्ने मान्छेले लगाएको ज्याकेट यही हो कि होइन ?’ डीएसपी तामाङले जानकीलाई सोधे। प्र’माणहरू यसरी जो’डिएपछि जानकीको पै’ताला मुनिको जमिन भा’स्सियो।
उनी केही बोल्न सकेनन्।सोम बार सानेपास्थित पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको घरमा उनकी पत्नी मुना र जानकीका छोरा विजय मृ’त फेला परेका थिए। भान्सामा मुना र’गतको आ’हालमा फेला परेकी थिइन् भने विजयले झु’ण्डिएर आ’त्मह’त्या गरेका थिए। विजयले मुनाको ह’त्या गरी आ’त्मह’त्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले भन्छ।
मंगलबार दिनभरी दाङबाट काठमाडौं बसमा यात्रा गर्ने क्रममा जानकी यही सोचिरहेका थिए– मेरो सोझो छोराले कसैको ज्या’न लिन सक्दैन। सानेपा घ’टना उनको क’ल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। तर सीसीटीभी फुटेज हेरेपछि उनी भन्न बा’ध्य भए, ‘भित्रको मान्छे त चिनिएन। तर, भित्र पस्दा मेरो छोराले लगाएको ज्याकेट र पि’र्काले हा’न्ने मान्छेको ज्याकेट मिल्छ।’